C + 2Na2SO4 + 2SiO2 → 2Na2Haa3 + 2SO2 + CO2
kaarboonka sulfate sodium silikon dioxide sodium silicate baaruud dioxide carbon dioxide
1 2 2 2 2 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C + 2Na2SO4 + 2SiO2 → 2Na2Haa3 + 2SO2 + CO2
Waa maxay xaaladda falcelinta C (kaarboon) ee Na2SO4 (sodium sulfate) kaga falcelisa SiO2 (silikon dioxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Na2SiO3 (sodium silicate) iyo SO2 (sulfur dioxide) iyo CO2 (carbon dioxide)?
Dhacdada ka dib C (kaarboon) waxay la falgashaa Na2SO4 (sodium sulfate) waxay la falgashaa SiO2 (silicon dioxide)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda SiO2 ma jiro (silikoon dioxide), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C + 2Na2SO4 + 2SiO2 → 2Na2Haa3 + 2SO2 + CO2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Na2SiO3 (sodium silicate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Na2SiO3 (silicon dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SiO3 (sodium silicate) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SO2 (silikon dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SO2 (sulfur dioxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 (silikon dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
Na2SO4 + Na2SO4 → Na2SO4
sulfate sodium sulfate sodium sulfate sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2SO4 + Na2SO4 . Na2SO4
What is reaction condition of Na2SO4 (sodium sulfate) reacts with Na2SO4 (sodium sulfate) ?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Na2SO4 (sodium sulfate)?
Phenomenon after Na2SO4 (sodium sulfate) reacts with Na2SO4 (sodium sulfate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga c (sodium sulfate), oo u muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda b (sodium sulfate), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2SO4 + Na2SO4 . Na2SO4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na2SO4 (sodium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2SO4 (sodium sulfate) badeecad ahaan?
sulfate sodium Milixda cusbada dhiigga disha
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2SO4 + SO3 . Na2S2O7
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Na2SO4 (sodium sulfate) oo ka falcelisa SO3 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Na2S2O7 (Disulfuric acid disodium salt)?
Dhacdada ka dib Na2SO4 (sodium sulfate) waxay la falgashaa SO3 ()
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Na2S2O7 (Cusbo dhiigga loo yaqaan 'Disulfuric acid unfadium salt'), oo ka muuqda dhammaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2SO4 + SO3 . Na2S2O7
Su'aalaha la xiriira badeecada Na2S2O7 (milix disodium disulfuric acid)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Na2S2O7 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2S2O7 (Disulfuric acid disodium cusbo) alaab ahaan?
Na2SO4 → 2Na + SO42-
sulfate sodium sodium Burbur
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2SO4 → 2Na + SO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Na2SO4 (sodium sulfate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Na (sodium) iyo SO4 (Sulfate)?
Dhacdada ka dib Na2SO4 (sodium sulfate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga SO42- (Salfateeti), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2SO4 → 2Na + SO4
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Na (sodium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na (sodium) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta SO4 (Sulfate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee SO4 (sodium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SO4 (Sulfate) badeecad ahaan?
2AlCl3 + 3Na2SO4 → Al2(NA4)3 + 6NaCl
chloride aluminium sulfate sodium sulfate aluminium chloride sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2AlCl3 + 3Na2SO4 → Al2(NA4)3 + 6NaCl
What is reaction condition of AlCl3 (aluminium chloride) reacts with Na2SO4 (sodium sulfate) ?
How reactions can happened and produce Al2(SO4)3 (aluminium sulfate) and NaCl (sodium chloride) ?
Phenomenon after AlCl3 (aluminium chloride) reacts with Na2SO4 (sodium sulfate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2AlCl3 + 3Na2SO4 → Al2(NA4)3 + 6NaCl
What are the chemical and physical characteristic of Al2(SO4)3 (sodium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al2(SO4)3 (aluminium sulfate) sida badeecad ahaan?